Ny Minisitry ny fizahantany any Kenya, Najib Balala, dia mpiaro ny bibidia ankehitriny
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny Minisitry ny fizahantany any Kenya, Najib Balala, dia mpiaro ny bibidia ankehitriny
Jolay 31, 2020
kenya s fizahan-tany minisitry ny fizahan-tany najib balala dia mpiambina fiainana dia ankehitriny
Andro fankalazana manerantany no ankalazana amin'ny 31 Jolay ho fahatsiarovana ireo Rangers novonoina na naratra tamin'ny andraikiny ary hankalazana ny asa ataon'ny Rangers hiarovana ny lova voajanahary sy kolontsaina manerantany
Ny fiovan'ny toetrandro, ny fanararaotana ary ny fifandonana mitam-piadiana no olana sedrain'ny Lova Iraisam-pirenena. Ny areti-mandringana Covid-19 dia nanamafy ireo olana ireo izay misy fiatraikany amin'ireo tranokala sy ireo mpitantana miaro azy ireo.
Ny UNESCO World Heritage Center dia te hampiasa ny fotoan'ny Andro manerantany ho fahatsiarovana sy fisaorana feno fankasitrahana an'ireo mpiambina sy mpiasan'ny Lova Iraisampirenanay noho ny fahavononany sy ny fahafoizan-tenany amin'ny fiarovana ny lova iraisana, indrindra mandritra ity fotoan-tsarotra eran-tany ity.
Ankehitriny ny sekretera an'i Kenya momba ny fizahantany sy ny fiainana dia an'i Najib balala lasa Kenya Ranger mandritra ny iray andro hiaina voalohany ary hampiasa radio sy masolavitra ny asa mafy ataon'ireo mpamaly voalohany eran-tany. Ny fiarovana ny bibidia sy ny fiantohana ny fivezivezena sy ny fizahan-tany tsaratsara kokoa dia asa mahafa-po amin'ny firenena maro eto an-tany.
Ny Minisitra Balala dia nanana fankasitrahana betsaka tamin'ny asan'ny mpiambina ny fireneny.